Cheap mpempe akwụkwọ metal akụkụ polishing akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Mpempe akwụkwọ metal akụkụ gụnyere polishing na polishing. Polishing na-eji esemokwu mgbasa ozi dị ka sandpaper, pumice, na ezigbo ntụ ntụ iji kpochaa elu nke ihe mkpuchi ma ọ bụ ihe nkiri mkpuchi. Polishing eji n'ibu, chemical ma ọ bụ electrochemical mmetụta iji belata elu ike ike nke workpiece iji nweta nchapụta. Usoro nhazi nke elu ala.
Ahaziri mpempe akwụkwọ metal polishing na-egweri akụkụ-nkenke mpempe akwụkwọ metal polishing na-egweri nhazi igwe akụkụ
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ bụ ngwaahịa nke teknụzụ ọla na-arụ. Anyị enweghị ike ime na-ejighị akụkụ igwe rụọ ebe niile na ndụ anyị. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ sitere na winding filament winding, ịchacha laser, nhazi dị ukwuu, njikọta ọla, ịbịaru ígwè, ịkpụ plasma, na nkenke nkenke. Roll akpụ, mpempe akwụkwọ metal ekwe akpụ, anwụ ibe ya bụrụ, mmiri ugboelu ọnwụ, nkenke ịgbado ọkụ. Mpempe akwụkwọ metal a kọwara dị ka: mpempe akwụkwọ metal bụ a keukwu oyi na-arụ ọrụ usoro maka metal Ibé akwụkwọ (na-emekarị n'okpuru 6mm), gụnyere akpacha ajị, punching / ịcha / njọ, mpịachi, ịgbado ọkụ, riveting, splicing, na-akpụ (dị ka ụgbọ ala ahu). Akụkụ ya pụtara ìhè bụ ọkpụrụkpụ edo nke otu akụkụ ahụ. Mpempe akwụkwọ metal ngwaahịa nwere àgwà nke ìhè arọ, elu ike, eletriki conductivity, ala na-eri, na ezi uka mmepụta arụmọrụ. Ha nwere otutu uzo eji eme ihe.
Mpempe akwụkwọ metal nhazi e ọtụtụ-eji na ubi nke electronic, nkwukọrịta, akpakanamde ụlọ ọrụ, na ọgwụ na ahụ ike na ngwá. Dịka ọmụmaatụ, na kọmputa, ekwentị mkpanaaka, na MP3, mpempe akwụkwọ bụ akụkụ dị oke mkpa. Na mgbakwunye, a na-eji ya n'ichepụta ngwa ọgwụ, a na-ejikwa ya n'ụgbọ ala na gwongworo (gwongworo), ụgbọ elu ụgbọ elu na nku, tebụl ọgwụ, ụlọ ụlọ (ihe owuwu) na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ.
Uru nke Shanghai Ouzhan mpempe akwụkwọ metal polishing na polishing akpaaka akụkụ
Ahaziri mpempe akwụkwọ metal polishing igwe akụkụ
Main usoro Mpempe akwụkwọ metal polishing na-egweri
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ polishing
Osote: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ zọ